ဘူးသီးတောင်တို့ တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဘူးသီးတောင်တို့ တစ်ခေါက်
Posted by သားငယ် on Jul 29, 2012 in News | 32 comments
အားလုံး သိစေချင်လို့ ပါ
ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့၂ နှစ် (၂၀၁၀) သင်္ကြန်မတိုင်မီအချိန် လောက်က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင် မြို့ ကို ရောက်ခဲ့ ပါတယ်။ အကြောင်းက တော့ ဘူးသီးတောင်မြို့ မှာ ဓာတ်ပုံ မိတ္တူ ကွန်ပြုတာ ဆိုင် အသစ်ဖွင့်မယ့် မိတ်ဆွေ ကို ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးတာပါ။
ရန်ကုန်ကနေ မနက်စောစော ၆ နာရီလောက် ကားနဲ့ ထွက်လာခဲ့ ပါတယ်။ လမ်းခရီးက ကြမ်းလွန်းတာကြောင့် လမ်းမှာလည်း သစ်ပင် က လမ်းမပေါ်ကို ပိတ်ပြီး လဲနေတာ ကြောင့် စစ်တွေမြို့ ကို
နောက်တစ်နေ့ ည မိုးချုပ်မှ ရောက်ပါတယ်..
ရောက်ရောက်ချင်းဘဲ အသိအိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေချ နောက်နေ့ ဘူးသီးတောင်ထွက်မယ့်သင်္ဘော ကို လက်မှတ်
ရဖို့ သွားရပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကလည်း များသား..တစ်ဆိုင်လုံးစာ လိုအပ်မယ့် ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်လာတာ..ဆိုတော့ ။
နောက်နေ့ မနက်..၆ နာရီသင်္ဘော ထွက်ပါတယ်. ရာသီဥတုကတော့ သာသာ ယာယာ ပါဘဲ စစ်တွေ မြို့ ပေါ်ကိုတော့ ဘာမှန်းကို မသိလိုက်ပါဘူး ကားကြီးကွင်း ရယ် သင်္ဘောဆိပ်ရယ် ဘဲရောက်ခဲ့ တာ..မိုးကလည်း
ချုပ် မီးကလည်းပျက်ဆိုတော့ ..ဘာမှမသိလိုက်ပါဘူး..
သင်္ဘောပေါ်မှာ ဆလင် နားနေခန်းမှာ အခန်းရပါတယ်..အမှန်ကတော့ ဆလင်ကို တစ်သောင်းပေးလိုက်လို့ 
ဆလင်က သူ့ အခန်းကို ပေးတာပါ…၂ ခန်းပါ ပါတယ်..ဆလင်အတွက်တစ်ခန်း စက်ဆရာ အတွက် တစ်ခန်း
ဆိုပြီးတော့ ခရီးသည်တွေကတော့ ကြမ်းပြင်မှာ တာလပတ်လေး ခင်းထိုင်ပေါ့..ကုလားထိုင်လည်း ငှားလို့ ရပါတယ်..အဆင်ပြေသလိုပေ့ါ …စစ်တွေကစထွက်တည်းက..ဇင်ယော်တွေကတော့ သင်္ဘောနှင့် အစာတောင်းရင်းပျံဝဲ ရင်းလိုက်လာပါတယ်…
ကျနော်လည်း ပျင်းပျင်းရှိတာနှင့် တလမ်းလုံး ရု့ ခင်းလေးတွေ ငေးရင်း ပေါ့..ကင်မရာ အသစ် ကြီး ထုပ် ဓာတ်ပုံတွေ တဖြတ်ဖြတ်ပေ့ါ..သာသာယာယာပါဘဲ တလမ်းလုံး အခန်းထဲဝင်ကွေးလိုက် ..အပြင်ထွက် လိုက်နဲ့ ဘဲ ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်လောက်
ထူးထူးဆန်းဆန်းစမြင်ရတာကတော့ စစ်သင်္ဘော ၂ စင်း ဆိပ်ကမ်းမှာကပ်ထားတာရယ် သင်္ဘောပေါ်မှာ သံဆူးကြိုးတွေ အပြည့်တင်
ထားတာရယ်..နောက်ထပ် ဆိပ်ကမ်း အပေါ် နားမှာ ရပ်ထားတဲ့ ယူအန် ကစပိဘုတ်တွေပါ..တစ်သတ်နဲ့ တကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်း
မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ကို ရန်ကုန်မြစ်ဝကနေ အထက် မြစ်ကြီးနား အထိဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်အခေါက်ခေါက်..ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်..ချင်းတွင်းဆိုလည်း အထက် ဖောင်းပြင်လောက်ထိကို မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်သွားခဲ့ ဖူးပါတယ်..တစ်ခါမှ အဲ့လိုများများမတွေ့ ..အလွန်ဆုံးတွေ့ မှ ၃ စီးလောက်တွေ့ ခဲ့ဖူးတာပါ..
ဘူးသီးတောင်မှာ စပိဘုတ်တွေများ မြင်မကောင်းအောင်ကို လေးငါးဆယ် လောက်ရှိပါတယ်..အဲ့ဒါမြင်တော့မှ ဟ.များလှချည်လားပေါ့
အဲ့ဒါနဲ့ ဘူးသီးတောင်ဈေး နားကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဆက်သွားပါတယ် ..တလမ်းလုံးမြင်ရတာကတော့ ကုလား လို့ ဘဲခေါ်မယ်ဗျာ ..ကုလားတွေချည်းပါဘဲ..ကုလား မြို့ တော်ကို ရောက်နေသလိုပါဘဲ..ဈေးနားက ဓာတ်ပုံဆိုင်အခန်းရောက်တော့ ပစ္စည်းတွေ ချ အနား
နောက်နေ့ ..ပစ္စည်းတွေဆင် ..ဆိုင်အတွက်လိုအပ်တာတွေလုပ်ရင်းနဲ့တစ်ပတ်လောက်က မအားဖြစ်ပါဘူး.. ဈေးသွား ချက်ဖို့ ဝယ်..
ကုလား ၀က်သားရောင်းတာလည်း မြင်ခဲ့ ပါ့..ဘာကုလားလည်းတော့မသိ..ကျန်တဲ့ အသားတွေက.အရှင်တွေရောင်းတာ ကြက်တို့ ဘဲတို့ ပေါ့..ငါးနဲ့ ငါးခြောက်ကတော့ ပေါမှပေါ..နေ့ တိုင်းဝက်နဲ့ ငါးပေါ့..စားရတာဘဲမရိုးအောင် ပါဘဲ..ချက်ကျွေးတာက ..ကုလား..
ယူအန်မှာ စပိဘုတ်မောင်းတယ်တဲ့..အလုပ်က..ကိုယ့်မ်ိတ်ဆွေနဲ့ ခင်နေတာ..ဆိုတော့ သူ က လာကူညီပြီးနေတာပါ..သူ့ အကူအညီန့ဲဘဲကုလားတောမှာ ဆိုင်ဖွင့်ရတယ် ဆိုပါတော့…သဘောတော့ကောင်းပါတယ်..လစာကလည်းကောင်းပါ့..ယူအက် ၁၂၀ ရတယ်
ဆိုဘဲ..ခါးကြားမှာ ဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့ အလုပ်ကတော့ ရှိမှစပိဘုတ်သွားမောင်းပေးရတာ ဆိုဘဲ ..ဆီအောက်ဆိုဒ်ကလည်း တစ်ရက်ကို
၂ ဂါလံနူန်းလောက်ဆိုတော့ စိုစိုပြည်ပြည်ပေါ့..
ရေကတော့ အခတ်အခဲရှိတယ်ဗျ..ေ၇ထမ်းကုလား ကို ထမ်းခိုင်းရတယ်…တစ်နေ့ ကို သုံးရာပေါ့..ရေသုံးစည် ရတယ်..သူထမ်းထည့်
ပေးတယ်..ရန်ကုန်မှာဆို..တစ်စည်ကို ငါးရာလားမသိ..ဈေးကတော့ သက်သာပေါ့..
ကျနော်က..နဂိုထည်းက ကုလားဆို..မုန်းတယ် ဗျာ..ရင်ထဲရှီတာပြောတာ ပါ..သူတို့ လုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက်လို့ ပါ..
ကုလားဆိုင်ဆိုလည်း ရှောင်တယ် ဗျာတော်ရုံ လုံးဝမ၀ယ်ဘူး ကားငှားစီးရင်တောင် ကုလားဆို မငှားဘူး..အဲ့လိုမျိုး..
ကျနော့်လိုလူမျိုးမှ တကယ်ကုလားတောထဲရောက်လာရတယ်..မစားရင်လည်းငတ်မှာ…အဲ့တော့လည်း.စားရတော့တာဘဲ ။
တစ်မြို့ လုံးနီးပါး ကုလား ဆိုတာ လက်ညိုးထိုး မလွဲဘူး ပေါမှပေါ ကုလားပြည်ရောက်နေသလိုဘဲ..၁၀၀ မှာ ကုလား ၉၀ ကျော်ရှိတယ်
ဆိုင်ကိစ္စလည်းပြီးပြီဆိုတော့ ကျနော်လည်း အားသွားပါတယ်..မြို့ ထဲလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ မြို့ ခံသုငယ်ချင်းက..ဘာမှာသလည်း
ဆိုတော့ ချောင်ချိုချောင်ကြားမသွားနဲ့ လူသူရှင်းတဲ့ နေရာ မသွားနဲ့ ကုလားရွာတွေထဲ လုံးဝ မ၀င်မိစေနဲ့ တဲ့ ..အဲ့လိုမှာရှာပါတယ်..
ကျနော်လည်း လမ်းအလည် တည့်တည့်လောက်ကလျှောက်ပါတယ်..ဆိပ်ကမ်းဘက်ကို သွား နာရီစင်နားကလဘက်ရည်ဆိုင် ရခိုင်ဆိုင် မှာ ထိုင်ပေါ့..မြို့ ထဲလိုက်ကြည့်တာ ဆိုင်ကယ်တွေလည်း ပေါမှပေါ..ကုလားတွေကြည့်ရတာ စုပ်စုပ်ပြတ်ပြတ်ကုလားတွေ
ချည်းများပါတယ်.. ကုလား သူငှေးတွေလည်း ရှိပါတယ် အရမ်းနည်းတယ်..ကုလား သူတောင်းစား ဆိုဒ်စုံကို အဲ့မှာတွေ့ ရတာဘဲ..
အပြန်ကျတော့ ဆိုက်ကားလေးနဲ့ ကုလား နင်းတဲ့ ဆိုက်ကားစီးပြီးပြန်တယ် ..ရန်ကုန်မှာ ငါးရာခရိးလောက်ပေါ့..ကုလားကို ဟေ့ရောင်
ဘယ်လောက်ပေးရမလည်းဆိုတော့ ၂၀၀ တဲ့ ..တန်ပါတယ်..ငါးရာတန်ထုပ်ပေးတာ ကုလားက တစ်ရာတန်မရှိဘူး အဲ့ဒါဆို မင်းတစ်ရာဘဲယူပေါ့ကွာ လို့ .ပြောပြီး ၄၀၀ အမ်းတာ ယူခဲ့တယ်..အမှန်က..စောက်မြင်ကတ်လို့ ..ကုလားကို နိပ်ကွပ်လို့ ကောင်းတာ
အဲ့ဒီတုန်းက ဟေ့ရောင်လို့ ဘဲခေါ်တယ် ကုလားဆိုရင်..အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ရသလောက်ခိုင်းတယ် တန်သလောက် မပေးဘူး အများအားဖြင့်တော့ အဲ့လို နိမ်ထားကြတာ..ပါ..
ဒါတောင်မှ တော်တော် အင်အားကြီးထွားလာလိုက်တာ .မနည်းဘူးဘဲ..လက်ထပ်ခွင့်တင်ရင် သုံးနှစ်လောက်ကြာတယ် ..လက်ထပ်ခွင့်ကျပြီဆိုရင် အမိန့် ထဲမှာ ကလေး တစ်ယောက်သာယူခွင့်ရှိသည် လို့ ရေးထားတယ်..လက်ထပ်ခွင့်ကျတဲ့ အချိန်မှာဘဲ
ကုလားက ၃ ယောက်လောက်မွေးပြီးပေါ့..
လ၀က ကိစ္စနဲ့ ရွာတွေ ဘက် ဓာတ်ပုံရိုက် ဆင်းရပါတယ်.လုံခြုံရေးစစ်သား တွေလည်းပါတယ် သေနတ်တွေတကားကားနဲ့ ပေါ့..ဒီတိုင်းသွားရင် အသတ်ခံရမှာတဲ့ ကျနော်လည်း မသိတော့ အင်တကယ်လားပေါ့..
နည်းနည်းကြာရင်သိမှာပါတဲ့ ..ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ အိမ်ထောင်စု စာရင်းပေါ့..တစ်အိမ်ထောင်ကို ဘယ်မှာမှမမြင်ဖူးဘူးဗျာ
ပတ်လုံးလေးတွေ စီထားသလိုဘဲ အဖေ နဲ့အဖေ အပါအ၀င် သားသမီး ၁၆ ယောက် တို့ ၁၈ ယောက်တို့ .ဟာဟ..နည်းတာမဟုတ်တဲ့ မိသားစုတွေဗျာ မြင်မကောင်းဘူး ..အပေအတေ တွေ လမ်းမပေါ်မှာ လေးဘက်တွေရွ့ွံတွေ ဗွက်တွေ
နဲ့ ကလေးကို ကလေး ကထိမ်း ..တောင်းစားတဲ့ ကလေးတွေက တောင်းစား..စားဖို့ သောက်ဖို့ အတွက် တော် တော်ခက်ခဲတဲ့ အနေ
အထားတွေဗျာ..ဒါပေမယ့် မသနား ပါဘူး..မကျွေးနိုင်ရင်မမွေးနဲ့ ပေါ့ဗျာ ..သူတို့ ကလူကို လူနဲ့ မြိုမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မွေး
နေကြတာ ဆိုတော့ မသနားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ ..ဒါလေးတွေဟာ အဆိပ်သီးလေးတွေ ပေါ့..အဲ့လိုဘဲမြင်ပါတယ်..ရွာတွေဆိုတာနည်း
တာမှမဟုတ်တာ..လူတွေကလည်း ဘယ်နည်းလိမ့်မလည်းဗျာ ..ဒါနဲ့ ကျနော်က.မေးမိတယ် အဲ့ဒါ ဘယ်က နေဘယ်လို ရောက်နေကြ
တာလည်းပေါ့ဗျာ ..မိတ်ဆွေက ပြောတယ် ဘင်္ဂလားက နေခိုးဝင်လာကြတာ တွေ တဲ့ အုန်းသီးခြောက်တွေကို ပုဆိုး ထဲ ထည့်ပြီး ရေထဲ မျော လာကြတာတွေ တဲ့ ဒီဘက်ရောက်ရင်ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ရွာတည်ပြီးနေကြတာ တွေတဲ့ .လ၀က ကလည်း စာရင်းကောက် နေတာ မနိုင်ဘူးတဲ့ လူတွေက မွေးလို့ များတာရော ခိုးဝင်လာတာတွေ ရော ဆိုတော့ မနိုင်လောက်အောင်ကို များ
နေတာ ဆိုဘဲ…လူလုံးနဲ့ လိမ့်ပြီးသိမ်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ တွေတဲ့ …
ဘင်္ဂလား ကနိုင်ငံက ကျနော်တို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းလောက် ဘဲ ၇ှီတာ ဆိုဘဲ လူဥိးရေ ကသန်း ၁၅၀ ကျော် ဆိုတော့ မနိုင်တော့ဘူးတဲ့ ..
အဲ့ဒီတော့သုံးစားမရတဲ့ ကောင်တွေ ကို မြန်မာပြည်ဘက်ကို မောင်းထုပ်တယ်တဲ့ ..ဘင်္ဂလားတွေကို ဒီဘက်ကို မောင်းထုပ်ပြီး
တော့မှ သူတို့ က အန်ဂျီအို အမည်ခံ အဖွဲ့ တွေ ဖွဲ့ပြီး တော့ မှ အဲ့ကောင်တွေကို ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တယ် တဲ့ အဓိက တော့ လူမရှိ
ရင် ရွာတည် အခြေအကုတ်ယူ ဒေသခံတွေကို တတ်နိုင်သလောက်မောင်းထုပ် ပေါ့ လူမသိအောင် ရှင်း ပစ်ပေါ့..အဲ့လိုနဲ့ နယ်ချဲ့ လာတာ ပါ..သူတို့ နိုင်ငံက အရမ်းကို သေးတယ် တဲ့ နိုင်ငံနဲ့ လူဥိးရေနဲ့ မအပ်စပ်တော့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ကောင်တွေ မောင်ထုပ်
ပြီးတော့ မြန်မာဘက်ကို နယ်ချဲ့ ခိုင်းထားတာ..လို့ ပြောတယ်..ဒီဘက်က စစ်တပ်ကလည်း အ၇င်တုန်းက စီမံချက်နဲ့ ..ရွာတွေကို
တစ်ရက်ကို တစ်ရွာနူန်း လောက်နဲ့တပ်နဲ့ ပိတ်ထားပြီးတော့ ကုလားတွေ အကုန် စစ်ကားပေါတင် ..နတ်မြစ်ဝ ဘက်ကို မောင်း
ထုပ်တယ် ပြန်လာလို့ မရအောင် ဗုံးတွေ ထောင် ..အဲ့လိုမောင်းထုပ်တာဘဲတဲ့ .ပြီးတာနဲ့ ရွာနေရာမှာ သစ်ပင်တွေ စိုက် ရွာတွေကို
ဖြောက်ပစ် အဲ့လို လုပ်တာ ဘဲ.တဲ့ ..ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဘက်က ..နည်းနည်းဘဲရှင်းနိုင်သေးတယ် ဟိုဘက်က လူကမွေးလို့ များတာရော ခိုးဝင်တာကလည်းတစ်နေ့ ကို ရာဂဏာန်း ကနေ ထောင်ဂဏာန်း၇ှိနေတာ ဆိုတော့ မနိုင်တော့ ဘူး.ကုလားရွာတွေ
တဖြည်းဖြည်းများလာလိုက်တာ ..ကြာလာတော့လည်း ရခိုင်တွေ သိပ်မနေရဲ တော့ဘူးပေါ့…
နေ့ ခင်းပိုင်းဆို လမ်းမ မှာ ကုလား တစ်ကောင်ကို ခေါ်ပြီး ပါးရိုက် လွတ်လိုက်လို့ ရတယ် ဘယ်သူမှဘာမှ ပြန်မပြောရဲ ဘူး ၀ိုင်းတော့
၀ိုင်းကြည့်ကြတာ ကုလား အုပ်စုလိုက်..မောင်းထုပ်လိုက်ရင်..တစ်ကောင်မှ ဆက်မကြည့်ရဲဘူး လစ်ပြေးတာဘဲ…အဲညပိုင်းတော့
ယောင်လို့ တစ်ယောက်ထဲအပြင်ထွက်မသွားနဲ့ .ကုလားတစ်ယောက်က တွေ့ တာ နဲ့ အချင်းချင်း အချက်ပြပြီးနောက်က လိုက်လာ
လူလစ်တာနဲ့ ..အစဖျောက်တာဘဲ တဲ့ ..ကိုယ်နဲ့သိသည်ဖြစ်စေ.မသိသည်ဖြစ်စေ ..ရန်စရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ အဲ့လို
လူလစ်ရင် ရှင်းပြစ်တာဘဲ တဲ့ …
ကျနော်လည်း နောက်တစ်ပတ်လောက်နေတော့ သူတို့ ပြောတာ တကယ်ပါလားလို့ ယုံလိုက်ရပါတယ်..ကျနော်တို့ ကမိတ္တူဆိုင် စာစီ
စာရိုက်လည်း ရတယ် ဓာတ်ပုံလည်းရတယ်ဆိုတော့ ရဲမှု့ ခင်း ကလာပါတယ် ဗျာ သူတို့ ကင်မရာထဲက ပုံတွေ ထုပ်ချင်လို့ ပေါ့..
အစီရင်ခံစာလေး စာရိုက်ပေးပါဥိးတို့ ..လာတယ်လေ..
မြင်မကောင်းအောင် အသတ်ခံရတာတွေချည်းဘဲ တွေ့ လိုက်ရင်…အခုဖြစ်တာ က ကျောက်နီမော်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်နော်
ကျနော်ရှိတုန်းက..ကြည့်လိုက်ရတာ ရဲမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေ ရန်ကုန်ကရွေ့့ပြောင်းလာတဲ့ ဆင်း၇ဲသား မြန်မာ မလေး ၂ ယောက်
၁၈ နဲ့ ၂၀ ကုလား မိသားစုက ၀ိုင်း သမ ထားတာ …သတ်ပြီးတော့ မြေမြုပ်ထားပြီး..ပြီ..ပုတ်လို့ ပွလို့ ပေါ်မှ သိတာ ..တရားခံတွေကို
မိတယ် အဖေလုပ်သူက ဦးဆောင် နောက်လိုက် ကညီရယ် သားလေးယောက်၇ယ်..စဉ်းစားကြည့်ပါဥိး..
အဖေရယ် သားလေးယောက်ရယ် ဦးလေးရယ် ပေါင်းပြီး ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တစ်လှည့်စော်ကားကြတဲ့ အဖြစ်
ခွေးဇာတ်ထက်တောင်ဆိုးသေး..စဉ်းစားကြည့်အဖေကလည်း သားတွေရှေ့ မှာ လုပ်..သားတွေကလည်း အဖေရှေ့ မှာထားပြီး…ဟား.
တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့ ကောင်တွေပါလားလို့ ..၆ ယောက်လုံးဖမ်းမိပါတယ်….ရဲမှတ်တမ်းရိုက်ပေးရင်းနဲ့ ..တော်တော် ကို အော့နှလုံးနာတယ်ဗျာ ဖတ်ရတာ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရတာလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်၇တယ်…
နောက်ထပ် အမှု့ တွေကတော့ လူသတ်မှု့ ဗျာ သတ်တာ ကရိုးရိူးသတ်တာ မဟုတ်ဘူး တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့ တုပ်ပြီး တော့ နိပ်စက်တာ
မေ့မြောသွားရင် ဒီတိုင်းထားတယ်..သတိပြန်ရလာရင် ထပ်နိပ်စက်တယ် အဲ့လို တစ်ပတ်လုံးလုံးလုပ်ပြီးသေတော့ အဲ့အလောင်းကို
တုံးထားတာ တစ်တုံးကို ခြောက်လက်မထက်မပိုဘူးဗျာ ….ရက်စက်ချက်က ကမ်းကိုကုန်အောင်ဘဲ….
စိတ်ကုန်လို့ ကျနော်နောက်မှု့ ခင်းသတင်းဆို ဓာတ်ပုံလည်းထုပ်မပေးတော့ဘူး စာလည်းရိုက်မပေးတော့ဘူး ..သူငယ်ချင်းကဘဲ
ကျနော့် နဂိုထည်းက အမုန်းဓာတ်ခံက ပိုပြီးတိုးပွားလာရတယ် ဗျာ …လူချင်းချင်း ဘာလို့ များအဲ့လို နည်းတွေနဲ့ ရက်စက် နိုင်ရတာလည်းပေါ့…ကိုယ့်ကြောင့်သူတစ်ပါးမထိခိုက်ပါစေနဲ့ လို့ အထူးသတိပေးချင်ပါတယ်..အားလုံးဟာ အဖြစ်မှန်တွေဆိုတာကို
သစ္စာ ဆိုရဲပါတယ်…ဒါပေမယ့်.သိစေချင်ယုံသက်သက်ဘဲဖြစ်ပြီး ရှောင်နိုင်ရန်အတွက်ပါ..
ရန်ကုန်မှာတောင် ဒီလောက် စီပင်ပြန့် ပွား နေတာ..အဲဒီနေရာဆို..
ဆင်းစားကြပါဦး အရပ်ဂဒို့ ရယ်
ကဲ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင် နောက်နှစ်ငါးဆယ် စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး
No need to think anymore for future 50 years. It’s time to act. Here, act does not mean go and kill the kalars but educate/advise people who are still not aware what muslims are… Especially, the girls and the younger generation… Even in Yangon, you can see the girls/women (Myanmar) would not mind to be withamuslim. Sayargyi Shwe Done Bi Aung wrote good books. You may want to look for them.
” act does not mean go and kill the kalars
but educate / advise people who are still not aware what muslims are…
Especially, the girls and the younger generation ”
မှန်ပါတယ် Shwe Phyu ရေ ။
Shwe Phyu ရေ ဒီ Burglish စာရိုက်တဲ့ Page လေး သုံးကြည့်ပါလား ၊ ကောင်းတယ် ။
နေကြတာ ဆိုတော့ မသနားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ ..ဒါလေးတွေဟာ အဆိပ်သီးလေးတွေ ပေါ့..အဲ့လိုဘဲမြင်ပါတယ်
နောက်လဲ ကိုသားငယ် ရေးမယ့် စာတွေ ကို အဆက်မပြတ် ဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျို့ 
အရေးအသား အလွန်ကောင်း၏ —
ဆက်ရေးပါရန် တိုက်တွန်းပါ၏ —
၎င်းတို့၏ သဘောသဘာဝ ပီပြင်ပါ၏ —
ပေါက်ကွဲမှု အထွေထွေအား ကြောက်လန့်စိုးရွံ့မိပါ၏ —
တာဝန်ရှိသူများ နည်းလမ်းရှာသင့်၏ —
“”ကုလား ၀က်သားရောင်းတာလည်း မြင်ခဲ့ ပါ့..””
မျက်လုံးထဲကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်နေတယ်ဗျာ….
ဓာတ်ပုံလေးများ ပါ တင်နှိင်ရင်တော့ တော်တော်ကောင်းမှာဘဲနော်….
ဒီအချိန်မှာ ဒီပိုစ့်ဟာ သင့်တော်သလား မသင့်တော်သလားလို့တော့ ကျုပ်မဝေခွဲတတ်ဘူး……
ဒီပိုစ့်မှာရေးထားတာတွေဟာ အမှန်တွေပဲလို့တော့ ကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျုပ်ခံပြင်းတာက အဲဒီအမှန်တွေကို ဘာကြောင့် အခုမှ အဖက်လုပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားလာကြသလဲ…။
ဟိုမှာဖြင့် စစ်မြေပြင်လိုဖြစ်နေတာနဲ့ မနေရဲလို့ရယ် စိတ်ညစ်လို့ရယ်ကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ပြောင်းလို့အခွင့်သာတဲ့ ရခိုင်တွေ ပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြတာ –
အခုဆို ရခိုင် ဘယ်နှစ်ရာနှုံးမှတောင် မကျန်တော့ဘူး…. ။
အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက နယ်မြေတခုလုံး မလွှမ်းသွားရအောင် ကုလားတွေကြားထဲ ရွာသွားတည်ပေးထားတာ လမ်းဖေါက်ပေးထားတာ၊ မြေပြင်ပေးထားတာတွေရှိတယ်။ အဲဒါလဲ မနေရဲတာနဲ့ ပျက်ကုန်တာပဲ…။
ပိုဆိုးတာက ရခိုင်လူငယ်တွေအများအပြားဟာ ပြည်ပထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကုန်ကြတယ်။
Dear U U Parlayra,
I think people are getting interested in this case only now because of the terrorist attack. Like I said to TharNge, this is only one of the cases happened when he visisted there but there were so many case like this even these days but no one cared that before simply because they did not know. But those kalars have now shown the real identites of them….
The sad thing of the consequences of that Junta oppression, not only Rakhine young generation had to go out and work but also young generations of other races. Look at Irrawaddy, Upper Myanmar, Mon, Karen, no wonder Chin. It’s very sad to see even nowaday, that idea of oppression upon national races is still there in some of the army members. But hope, one day, the Myanmar Army will be gurding all Myanmar lives…..
အရှိကို အရှိအတိုင်းရေး ထားတော့ ..
“..မြို့ ထဲလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ မြို့ ခံသုငယ်ချင်းက..ဘာမှာသလည်း
ဆိုတော့ ချောင်ချိုချောင်ကြားမသွားနဲ့ လူသူရှင်းတဲ့ နေရာ မသွားနဲ့ ကုလားရွာတွေထဲ လုံးဝ မ၀င်မိစေနဲ့ တဲ့ ..အဲ့လိုမှာရှာပါတယ်..”
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ဥပဒေသက်ရောက်မှု မရှိတဲ့နေရာ ရှိနေပီဘဲ
ထင်တာထက် အခြေအနေဆိုးနေပီ နောင်ရေး ဒီကုလားတွေနဲ့ရင်လေးစရာ
ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဘက် မရောက်ဖူး ဘူး ဗျ
အဲဒီ ဒေသ အကြောင်းကြားဖူးပေမဲ့ အခုလောက်တော့ သေချာ မသိဘူး
ပေးထားချက် အမှန် သိမှ အဖြေမှန် ထွက်မှာ
အခုလို သတင်းမှန် လေးတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရရင် ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး အတွက်ရော
ဆုံးဖြတ် ဖြေရှင်းရမဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ အတွက်လဲ ဘာလုပ်ရမယ် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားနိုင်မှာမို့ အကျိုးရှိမှာပါ
ကိုသားငယ်မှာ အဲဒီဒေသ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ရှိဦးမှာပါ
မိသားတစ်စုကို ကလေး၁၅ ယောက် ၁၆ ယောက်မွေးတယ်တဲ့လား…ဘုရား ဘုရား…တကယ်ပဲ
တစ်နေ့တစ်ခြား ကြိးထွားလာတဲ့ ကုလားအရေးက အမှန်တကယ်
ရင်လေးစေပါတယ် ၊ခိုးဝင်လာတဲ့ ကုလား ၊ထပ်မွေးလာတဲ့ ကုလား
ဒိထက်ပိုများလာရင်နောင်လာ မည့်နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ရခိုင်
ပြည်နယ်ဟာ ကုလားပြည်နယ် ဖြစ်လာတော့မှာပါ
လူသားအချင်းချင်း စာနာရမယ်လို့ နားလည်မါတယ် ဒါပေမဲ့ ကုလား
တွေကို စာနာမိရင် သေချာပေါက် ဒုက္မရောက်လိမ့်မယ်၊တိုင်းပြည်
ဖျက်ဖို့အကြံကို စနစ်တကျ ကြံစည်ပြိး လုပ်ဆောင်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ကုလားအရေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်
အစိုးရအနေနဲ့ တိကျခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊အရေးယူ
ဆောင်ရွက်မှုတွေ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာ သေချာ
လေ့လာသုံးသပ်ပြိး အကောင်အထည်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
နောက်နောင် ကုလားကို ပစားပေးပြိး မဆက်ဆံကြဖို့လည်း
ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက အမျိုးသားရေးအမြင်ရှိရပါမယ်
” ကုလားဟူသမျှ နှိမ်ချဆက်ဆံကြ “. ပါ
Dear Thar Nge,
This is one of the cases you personally faced when you visited there. But how many of this similar cases happened to Rakhine/Myanmar people years after years??? Yes, since kalars are spreading like cocoroaches there, Junta sent poor families from other parts of Myanmar by giving them some blocks of land and of course with some cattles to settle down there. When terrorist attack happened in Maungdaw, the doctor who was killed by those terrorist kalars was Burma but his wife was Rakhine who was also killed.
I have put comments on MG who were saying/posting about human rights and bla bla bla. If someone acts like human, in return, he/she will be regarded as human too but if those act like animals, they will be treated like animals too.
အဖြေရှာဖို့က နောက်တောင်ကျနေပြီ ထင်မိပါတယ် ။
ကိုယ့်လူမျိုးတွေဖက်က ၊ အမျိုးချစ်သူ အတော်များများ ၊
တော်တော်လေးကို ( တော်တော်လေးကို ) အနစ်နာလည်းခံ ၊
ဇွဲရှိရှိ နှင့် လည်လည် ဝယ်ဝယ် လုပ်မှပဲ ၊
တားဆီးနိုင်တော့မယ့် ပြဿနာ ဖြစ်နေပါပြီ ။
အဖြေရှာ ဖို့ အဆင့် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘာဆက်လုပ်ရမယ် ၊ ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ။
အစိုးရပိုင်းက စဉ်းစားနေလောက်ပါပီ ။ ထင်တာကိုပြောတာ ။
အမှန်တော့ ဒီကိစ္စက ရွာလည်ကောင်ဆူလို့ ရွာစည်းရိုးအဖျက်ခံရတဲ့သဘောလေးဘဲပြောရမလား
တစ်နေ့တုန်းကဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လူသုံးယောက်ကိုမေးကြည့်တယ်
ဘင်္ဂလာလီဆိုတာ မင်းတို့နိုင်ငံကလူတွေလားလို့ မေးကြည့်တော့
သူတို့နိုင်ငံမှာ ဘင်္ဂလာလီလူမျိုးဆိုတာ မရှိရပါဘူးတဲ့
အစ္စလာမ်ရယ် ဟိန္ဒူရယ် အစရှိသည်ဘာညာလူမျိုးတွေပေါ့ အနှီးဘင်္ဂလာလီဆိုတဲ့လူမျိုးဆိုတာဟာ
မြန်မာပြည်က လူမျိုးများသာဖြစ်ကြပါတယ်လို့ ပြောကြတာဘဲ
ဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ အသုံးနှုံး ကို ဘယ်သူက ဘယ်ချိန်မှာ ဘာ့ကြောင့် စတင်ပြီးသုံးစွဲခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့
( ကိုယ်လိုသလို ဗလာစာရွက်မှာရေးထားတာတွေကိုခွေးလိုလာဟောင်ပြမနေကြနဲ့ ခေါင်းထဲမထည့်ထားဘူး )
ပြောရရင်တော့ တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်ခြင်းရယ် လွန်ခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်သူ နွားတစ်စုဟာ
အဲ့သည်ဒေသကို မထိမ်းသိမ်းနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဟိုဖက်ကလူတွေက နှစ်ပေါင်းလေးငါးဆယ်လောက်
သေခြာတာကတော့ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် သူတို့စောက်မျိုးတွေပေါ့
ဒီအချိန်မှာဆိုခဲ့ပြီးသလို ကိုယ်မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒေသတစ်ခုရဲ့ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာအကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာ
လွန်ခဲ့တဲ့ နွားအစိုးရအနေနှင့် ဘာမှမပြောဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာ အံရော
ထိပ်ပြောင်ကတော့ ပြောတာဘဲ ဒီလူတွေဟာ ကျုပ်တို့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့
ဖြစ်သင့်တာ ဒီအချိန်မှာ ဒီဒေသကို အထူးစီစစ်ရေးအဖွဲ့တွေလွှတ်ပြီး
( ကလားရခိုင် ပြတ်ပြတ်သားခွဲပြစ်ရမယ့် အချိန်ဘဲ )
လာမယ့်နှစ်တွေမှာ သန်းကောင်းစာရင်းကောက်မယ်ဆိုတော့ ဒီမှာမမွေးဘဲခိုးဝင်လာမယ့်
ကိုယ့်လူတွေအကြောင်းကိုယ်သိနေတယ် ကိုယ်ရဘို့ မြန်မာပြည်ကြီးကို အရည်ကျိုပြစ်ရလည်းလုပ်မှာဘဲ
ထိုင်းမှာလည်းမြန်မာပြည်သားတွေ ထိုင်းလဝကနဲ့ပေါင်းပြီး ထိုင်နိုင်ငံသားလုပ်နေကြတာဘဲ
ထိုင်းဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကလည်း ကိုယ့်အမျိုးတွေကို ခေါ်သွင်းနေကြတာဘဲ
ပြောခြင်တာက ဘာသာတူ ဓလေ့တူပြီး ပေါင်းဖက်လို့ရတဲ့သဘောရှိတယ်
အနှီး ရခိုင်ဖက်က တောင်ကျော်လာတဲ့သတ္တဝါတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ
တစ်လောကတောင် ထိုင်းနယ်စပ် မြန်မာမြေထဲမှာ စက်ယန္တယားကြီးတွေနဲ့
ကိုလက်နက်တွေကိုင်ဆောင်ပြီး အပီကျောက်ချပြီး နှစ်ရှည်အပင်တွေကိုစိုက်နေကြတဲ့ အုပ်စုကြီးကို
ဒီလူစုလူဝေးကြီးကို ဘယ်ကောင်ကလား ဘယ်ကောင်နွား ဆိုပြီးပြတ်ပြတ်သားသား
ဒို့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး မောင်းထုတ်ပြစ်လို့ လက်လွှတ်စပယ်ပြောလို့လည်းမရဘူး
သူတို့တွေရဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းတွေ မှတ်ပုံတင်တွေကို အခြေခံပြီး ကလား နွား ခွဲပြစ်ရမယ်
ဆိုခဲ့ပြီးသလို လဝက နွားတွေကို သေသေခြာခြာကြပ်မတ်ရမယ်
ကျောက်ပန်းတောင်း သားတွေ ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးသင့်ပြီဗျို့
ဖြစ်လာသမျှ အားလုံးသည် မိမိတာဝန်သာလျှင် ဖြစ်လာပေတော့သည် ။
နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်ယင် လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးက လပ်ငွေယူပြီး
လာတော့မှာပါ…။ ခု မော်လမြိုင်မှာ အသံထွက်လာပြီ…။ ၀င်စစ်လိုက်တော့ နိုင်ငံသားကဒ်နှစ်သောင်းကျော် ထုတ်ပေးထားတာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တောင် ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်မထားဘူးလို့ကြားတယ်…။ ကုလား ရခိုင်ကနေ မွန်ပြည်နယ်ထဲတောင် တော်တော် များနေပြီ ပြောတယ်…။ ကြည့်လုပ်ကြဦး
ကိုသားငယ်ပြောတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဆိုးတဲ့ အပိုင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ India, Pakistan and Bangladesh က ဆိုးတဲ့ မူစလင်တွေဟာ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီထက်တောင်ဆိုးသေးတယ်။ သူတို့နေတဲ့နေရာကို ညမပြောနဲ့နေ့ခင်းကြောင်တောင် တော်ရုံတန်ရုံရဲတွေတောင် မသွားရဲဘူး။ အဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေ ကို slum လို့ခေါ်တယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ ဒီမှာဖြစ်နေတာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ တဖက်က အခြေနေမကောင်းတဲ့လူတွေ ဒီဖက်ကို ကျွံဝင်လာတာကိုး။ သူတို့သိတယ်လေ ဗမာပြည်မှာ သူတို့ဘာလုပ်လုပ် ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတာ။ နောက်ဆုံးဗျာ UN/NGO ကကျွေးထားနိုင်တယ်။ သူတို့ခလေးမွေးချင်သလောက်မွေး မြန်မာဥပဒေ အရ (ဦးနေ၀င်း မိန်းမ ၂ယောက် လိုချင်လို့ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေလို့ထင်ပါတယ်) မိန်းမ ကြိုက်သလောက်ယူလို့ရတယ်။တရားဝင် လေးယောက်ယူရတယ်ဗျာ။ နှစ်ယောက်ကိုကွဲတယ်ဆိုပြီး နောက်နှစ်ယောက် ထပ်ယူမယ်။ ဘာလုပ်နိုင်မတုံး။ ဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီး များများယူတယ် မွေးတယ် အတားအဆီးမရှိ။ လူကလူကိုမျိုမှာ ပေါ့ဗျာ။ အစွန်းရောက်များရဲ့long term plan ပေါ့။ ဗမာနိုင်ငံသားများ မှာတော့ဥပဒေရှိတာတောင် ၂ ယောက်ယူတဲ့လူရှားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗမာပြည်ဟာ သူတို့အတွက် အစွန်းရောက်ဝါဒီပြန့်ပွားရေး၊ လူမျိုးပြန့်ပွားရေး အဓိကနေရာဘဲ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ သူတို့လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ သြစတြေးလျ နဲ့ အမေရိကစသည်မှာ တလင်တမယားစနစ်ပဲ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေကလည်း တစ်ခြား မြန်မာတိုင်းရင်းသားrefugeeတွေလက်ခံပြီးတော့ ဒီလူတွေလက်ခံဖို့ကျတော့ တုတ်တုတ်မလှုပ်။ ဒါတောင် ဟိုမှာရောက်နှင့်နေတာတွေ တော်တော်များတယ်။ ရခိုင်ကိစ္စ မှာသူတို့အကြံအစည်ကလည်း ကောင်းတယ်ဗျ။ ဘုရားလည်းဖူးရင်း လိပ်ဥလည်းတူးရင်း ပေါဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေခွင့်ရမယ်။ တချို့တ၀က်လည်း refugee အဖြစ် တတိယနိုင်ငံမှာ သွားနေနိုင်တယ်။ ကျွန်တော် သူတို့အားလုံးကို မကောင်းဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး ဒါပေမဲ့တော်တော်များများ ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြံအစည်တွေရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ မျက်နှာနှစ် ခုနဲ့လူတွေဗျ နိုင်ငံခြားသားဆို ငိုပြမယ်၊ သူဒို့ကိုကျွေးထားတာကိုး။ နိုင်ငံခြားသားတွေက သူတို့ကို သနားအောင်ငိုပြရင် ကူညီပေး ရှေ့ကရပ်တည်ပေးတတ်တဲ့လူမျိုးတွေ။ ဒီလောက်မွေးနိုင်တဲ့လူတွေ ကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ အများအားဖြင့် Asian တော်တော်များများ ဟာ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ရောက်နေရင်တောင်မှ ခလေးတစ်ယောက် ယူဖို့ကို plan ချရတယ်။ ယူချင်တိုင်းမယူနိုင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း အဆင်မပြေလို့ ခလေး မယူနိုင်တဲ့လူတွေ အများကြီးပါ။ မြန်မာပြည်မှာ သူတို့ဆင်းရဲပါတယ် အဖိနှိပ်ခံရပါတယ် ဆိုတာ ငါးဖမ်းစားလို့ရတယ်၊ ရေခံမြေခံကောင်းတော့ စိုက်ပျိုးစားလို့ရတယ်။ ဟိုဖက်နိုင်ငံမှာ ဆိုသူတို့ ဒီလိုတောင် ရှာစားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ မောင်းတောမှာ လမ်းမမှာ တောင်းစားနေတယ် ဆိုတာ တကယ်လည်းပါနိုင်တယ်။ ရုပ်ပြတောင်းစားနေတာတွေလည်းအများကြီးပါမယ်ထင်တယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ လာမယ် ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်။ အထက်ကိုတင်ပြမယ်။ ထောက်ပံ့တာတွေ ပိုရမယ်။ တတိယနိုင်ငံသွားရမယ်။ဒါပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကုလားဆိုရင်မုန်းတယ်ဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့် မိဘ နဲ့သိတဲ့ မူဆလင် ကုလားမိသားစု တွေ အများကြီးဘဲ။ တော်တော်များများက တကယ်ကောင်းတာပါ။ ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးပါတယ်မြို့ထဲက ကုလားတစ်ချို့အင်မတန်မောက်မာ မိုက်ရိုင်းတာ။ ဒါပေမဲ့ ဗမာထဲမှာလည်းရှိတာပဲဗျာ။မူဆလင် အန်တီကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင် ချမ်းသာတယ်။ ပညာတတ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ ဒါပေမဲ့ လုံးဝမာန်မာန မရှိ။ ဖော်ရွေတယ်။ တန်ဆောင်တိုင် သူများတွေ အလှုလုပ်ရင် သူက အချိုပွဲ လက်ဆောင်ပေးတယ်။Ramadan ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့အိမ်လာပြီး အချိုမုန့်တွေ တစ်ခါတစ်လေ အသားဟင်း၊ကြက်ကောင်လုံးကင်တောင် ပါသေးတယ်။ ရိုးရိုးအေးအေးနဲ့။ သူ့ဘာသာတရားလည်း သူကိုင်းရှိုင်းတယ်။ သူ့အိမ်မှာ သူ့ကိုငယ်ငယ်ကတည်းက ကြည့်ရှုလာတဲ့ တိုင်းရင်းသား ခရစ်ယာန် အဖွားကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ။ အသက်ကြီးတော့ သူနဲ့အတူတူပဲနေခိုင်းပြီးကြည့်ရှုတယ်။အဖွားကြီးက အသက်ကြီးလာတော့ ဘုရားကျောင်းမသွားနိုင်ဘူး။ သူက တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း အိမ်မှာ ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာ ခေါ် ပေးတယ်။ ဒါမျိုးတွေ့ရခဲတယ်။ အာရပ်နိုင်ငံတွေမှာ Bible တောင်တွေ့ရင်မီးရှို့၊ အခန့်မသင့်ရင် လူပါသတ်တယ်ကြားတာပဲ။ မလေးရှားမှာလည်း တော်တော်လေးကြာပါပြီ ခရစ်ယာန် တရုပ်တွေ ကို အန္တရာယ် ပြုလို့ သြစတြေးလျက တောင် တော်တော်များများ လက်ခံလိုက်ရတယ်ကြားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်က မြန်မာမူစလင်ထဲမှာ အဲဒီလိုအများကြီးပါ။ ကျွန်တော့် ဆရာမထဲမှာလည်း အဲဒီလိုရှိပါတယ်။ အရမ်းလည်း စေတနာထားတယ်။ တစ်ခြားဘာသာအန္ဒိယလူမျိုးထဲမှာလည်း အများကြီးကောင်းတာတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဘာသာနဲ့လူမျိုး စွဲနဲ့မ မုန်းသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ကိုသားငယ် ကြုံတွေ့ရတာ လူယုတ်မာကုလားများလို့ ပဲဖြစ်မှာ ပါ။ ကုလားပြည်ဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတော်တော်များများ ဆင်တူပါတယ်။ တစ်ချို့နိုင်ငံခြားမှ ရှိနေတဲ့ မြန်မာကုလားတစ်ချို့ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကမှန်းသိရင် စကားတွေဘာတွေလာပြောတတ်တယ် ဖော်ရွေတယ်။ သူတို့တစ်ချိန်က မြန်မာပြည်မှာ နေခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြောတတ်တယ်။ တစ်ခြား ကိုယ့်လူမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေထက်တောင် ဖော်ရွေသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတိထားရမှာက အစွန်းရောက် အယူလွဲမှားနေတဲ့ လူတွေကိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမည်ခံပြီး ဆိုးသွမ်းနေတဲ့လူတွေ ဖုန်းကြီးဝတ်ကြီးနဲ့ မဟုတ်တာ လုပ်နေတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသားတစ်ရပ်လုံး ကို အန္တရာယ်ရှိစေတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အခုရခိုင် ကိစ္စကတော့ တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ တောင်ကုတ်ကိစ္စတောင် အကယ်၍ ကောလဟာလတွေပြောသလို မြို့ထဲကိုမ၀င်ဖို့ ပြောနေတဲ့ကြားက ၀င်သွား တယ် ဆိုတာ တကယ် ဟုတ်နေရင်တော့ ဒီလူတွေ အဓိကရုဏ်းစနိုင်အောင် တမင်သက်သက် အသေခံဖို့ဝင်သွားတာပဲ။ သူတို့က မြန်မာလူမျိုးအကြောင်းသိပြီးသား လူတော်တော်များများက ရိုးရိုးအေးအေး ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့က ဒေါသကိုလာဆွပေးရင် ဘာမှသိတ်မစဉ်းစားဘူး ဓားဆွဲဒုတ်ဆွဲပြီးခုတ်ကြတာပဲ။ ဒေါသနဲ့မှားကြတာများတယ်လေ။ ပြီးမှသာနောင်တရတာ။ အဲဒီတော့ နဂိုကတည်းက ကုလားမ၀င်ရရေးထားတဲ့နေရာ၊ လူဆိုးပေါတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့နေရာကို အတင်းဝင်သွားတယ်ဆိုရင် တော့ စဉ်းစားစရာပဲ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ မထင်နဲ့နော် အစွန်းရောက်ဆိုတာ မျိုးချစ်လို ငါ့နိုင်ငံ အတွက် “ခုခံကာကွယ်မယ် အသက်ပေးမယ်“ မရှိဘူး။ ငါ့ ယုံကြည်မှု အတွက် “ငါတိုက်ခိုက်မယ် အသေခံမယ်“ပဲရှိတယ်။ဆရာဦး အောင်သင်း ပြောဖူးတာကတော့ ကျားကလူနဲ့ အသိဥာဏ်မတူတော့ သမင်သတ်စားလဲ ရက်စက်တယ်လို့ သနားစရာလေးဆိုတာသူ မသိဘူး နားမလည်ဘူးတဲ့။
သူဗိုက်စာလို့စားတယ်ပဲသူသိတယ်တဲ့။ဒေါသကြောင့်သတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒီလိုစိတ်က ပိုရက်စက်တယ်။ သွေးအေးအေးနဲ့သတ်ရဲ တာပေါ့။ ဒီလူတွေက Brain washed လုပ်ခံထားရ သလိုပေါ့။ ဒီလိုလုပ်တာ ဘုရားအတွက်လုပ်တာ ငါတို့ဘာသာဝင်တွေနယ်မြေချဲ့နိုင်အောင် ဆိုတဲ့အယူအစွဲပဲရှိတဲ့အတွက် သူတို့ကကုသိုလ်လို့ပဲမြင်တယ်လေ။ ကျွန်တော်က တောင်ကုတ်ကိစ္စကို ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတင်ပြရုံသက်သက်ပါ။ တကယ်ဘာဖြစ်သွားလည်းဆိုတာတော့ အုပ်ချုပ်သူတွေတောင် စုံစမ်းနေတုံး ဆိုတော့။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းဆိုလား ပြောဖူးတယ်တဲ့ သမိုင်းကို ”မအ” အောင်လေ့လာပါ ဆိုလား။မှန်တယ်ထင်တယ်ဗျ ကိုယ့် သမိုင်းတင်မကဖူး သူများသမိုင်းတွေပါလေ့လာထား မှ ကိုယ်ကပြန်ပြောနိုင်မှာ။ သူတို့က အကုန်အကွက်ချလုပ်တာနော်။ အထင်မသေးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံ အခြေနေ သမိုင်းကြောင်း ဥပဒေ အကုန်နှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့လာထားပြီးမှလုပ်တာ။ ကိုသားငယ်ပြောသလို နေ့ခင်းကြောင်တောင် လမ်းပေါ်မှာ ခေါ်ပြီး
ပါးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဘယ်တော့မှပြန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သက်သေ သာဓကရှိတဲ့နေရာမှာ သူတို့မလုပ်ဖူး လစ်ရင်တော့ သေပြီသာပြင်ပေတော့။ သူတို့က ဗမာတွေထက်နပ်တယ်။ အကွက်ကျတယ်။စနစ်ကျတယ်။သူတို့ အထက်ကလူတွေက UN/NGO မှာလုပ်နေကြတာ တွေပါတယ်၊ တစ်ချို့ကအနောက်နိုင်ငံကနေ လှမ်းကွပ်ကဲနေတာ လူမြင်ကွင်း စည်းဘောင်ထဲမှာ ဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ် ဆိုတာ အကုန်သိပြီးသား ရိုက်သွင်းထားပြီးသား။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေက ဘယ်လိုဆိုရင်သနားတတ်တယ်၊ ကူညီတတ်တယ်ဆိုတာသိပြီးသား။ မြန်မာတွေက နလပိန်းတုံးတွေ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတာဆိုတော့ အပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်လို့ သူတို့ကယူဆတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် ဂျပိုးကိုလိပ်ဖြစ်အောင် ပြောနေကြတာပေါ့။ မြန်မာဆိုတာ တစ်ခုခုပြောလိုက်ရင် ကိုယ်မှန်နေတာတောင် ကိုယ့်အမှားလို့ပဲ တွေးမိအောင် ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတာ။ ဘယ်လိုပြန်လည်ချေပရကောင်းမှန်း မသိဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာက လူ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းဖြစ်ဖြစ် သဘောမတူရင် ထိလို့တောင်မရဘူး။ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်နဲ့မတူတာက သူတို့က bully or discriminate လုပ်ခံရရင် လုပ်ခံရတဲ့သူက speak up လုပ်ရတယ်။ အကျိုးအကြောင်းသေချာတင်ပြရတယ်။ဒါဆိုရင် သူတို့ကအရေးယူတယ်။ ဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေ လို့ကတော့ ခံပေတော့။ တခါတလေ ငြိမ်ခံနေရင်တောင် ကိုယ်ကမှားလို့ငြိမ်နေတယ်လို့ အထင်ခံရတာမျိုးရှိသေးတယ်။မြန်မာပြည်မှာက တော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်း အ၀ိုင်းက အနိုင်ကျင့်ခံရ တယ်ထင်ရင် ၀င်ပြောကြရ ကူညီကြရတာ။အဲဒီတော့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေငြိမ်နေရင်တော့ ကျွန်တော် တို့ ပိုခံရဖို့ကလွဲလို့ ဘာမှမရှိ။ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမှာ နိုင်ငံကြီးတွေကတော့ လူ့အခွင့်အရေး ဘာညာ အော်မှာပဲ။ ဟိုကောင်တွေက သရုပ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ တငိုငိုတရီရီလုပ်နေတာ သူတို့က ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မှ မရတာ။ ကိုယ်ကသာ ကိုယ်လုပ် စရာရှိတာ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်သွားဖို့ပဲလိုတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲ။ ဥပမာ-သီရိလင်္ကာ။ ကျွန်တော်တို့က ဘာသာတရား အရ မေတ္တာစိတ်ထား သည်းခံတယ်လုပ် လို့မရဘူး။ ကမ္ဘာက မှားလို့ ငြိမ်ခံနေတယ်ဘဲထင်မှာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက နားလည်မယ်လို့ မထင်နဲ့။ ကိုယ့်တစ်ယောက်ထည်း အတွက်ဆိုရင်တော့ သူတော်စဉ်တွေ လို အသက်ပေးပြီး မေတ္တာထားသင့်ပါတယ်။ထားနိုင်ရင် ပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလောက် မထားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုဟာက အများရှေ့ရေး ဒုက္ခ မရောက်ဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကို တကယ်မေတ္တာထားရင်ပေါ့လေ။ အုပ်ချုပ်သူတွေကိုပြောတာပါ။ နောက်တစ်ခုက ဦးနုက တစ်ချိန်တုန်းက သူ့မဲရအောင် ရိုဟင်ဂျာ ဘာညာ ထ လုပ်လိုက်တယ်ကြားတယ်။ တရားဝင် လူအများထောက်ခံမှုတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။
အခု အဲဒါလေးကိုဘဲ ”ငါ့စကား နွားရ” (စကားပုံ အမှန်မဟုတ်ပါ)ဖြစ်ပြီးတော့ ပုံကြီးချဲ့နေတာ။ တကယ်များ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်သူ အမတ်များ တစ်ခုခုမှားပြီး လိုက်လျောမိ လို့ကတော့ တသက်လုံး ”သေပြီဆရာ” ပဲ။ နောက်ဆို ရခိုင်တင် မကဘူး မြန်မာ ဘယ်ကစ ရိုဟင်ဂျာကစ ဆိုတဲ့ သမိုင်းအလိမ် ဖြစ်တော့မယ်။ ဘယ်လိုဘဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အသိပညာ အတတ်ပညာ ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေများများလိုနေသေးတယ်။ ဒီကောင်တွေက လူ့အခွင့်အရေး ကို ဘယ်လိုကောင်းကောင်းအသုံးချရယူရမယ် ဆိုတာ(စာသာမတတ်ရင်နေမယ် သင်ပြပေးတဲ့ဆရာတွေ အများကြီးပဲ) ကောင်းကောင်းနောကြေနေ အောင်သိတဲ့အချိန်မှာ ဗမာများကတော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘယ်လိုများပါလိမ့်လို့ စိတ်ကူးကြည့်တုံးရှိပါသေးတယ်။ပီးတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားသဘာဝတွေနားလည်တဲ့လူတွေ အများကြီးလိုတယ်။ ရှေးရိုးစွဲရှိတဲ့လူတွေ၊ အဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေ ကို အသိပညာ အတတ်ပညာ ပေးနိုင်အောင်လို့။ ဒါမှ ဘာပြန်ပြောနိုင်မယ် ဘာပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာသိလာကြမှာ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ”လူလူ”ဟစ်ခြင်းကို အစဉ်အမြဲခံနေရမှာပါ။ နိုင်ငံခြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာတွေ ပြန်လာပြီး ပညာဒါနပြုနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ။ အပြစ်မဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တစ်ချို့ကိုတော့လည်း သနားမိပါတယ်။
နောက်တစ်ခု သတိထားရမှာက သူတို့ဟာ မိန်းမနဲ့ ကလေး များ ကို လူသတ် မီးရှို့လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သုံးလာမှာ ကိုဘဲ။ ဒီနည်းဟာ အထိရောက်ဆုံးပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာက အမျိုးသမီး/ကလေးဟာ ပထမဦးစားပေးကိုဲး။ အဲဒါကြောင့် သူတို့စတင် တိုက်ခိုက်တုန်းက လူငယ်လေးတွေ ရှေ့မှာ ထုတ်ထားတာ။ စစ်တပ်က ပစ်ခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ ပွဲပြီးပြီ။ တကယ်တော့ ဒီအဓိကရုန်းမှာ ယူအန် နဲ့ အန်ဂျီအို တွေရဲ့ ပယောဂအများကြီးပါတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေ အကျိုးကို တကယ်လိုလားရင် ဒီလူတွေကို စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ လူမှုရေးရာ မြင့်လာအောင် သေသေချာချာ သင်ပြပေးရမယ်။ educate လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ အရင်စစ်အစိုးရကို မကြိုက်တာနဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကြီး တွေလိုလုပ်ပြီး ဒီလူတွေကို မြှောက်ပေး ဒီဘက်က ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေကို လည်းမျက်နှသာမပေး လုပ်ခဲ့တာ။ သူတို့သိပါတယ် ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာ ကျွေးထားရုံနဲ့ ဘယ်တော့မှပြီး မသွားဘူး ပညာပေးရေးက ပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုတာ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ပညာပေးသင့်တယ် ထင်ရင်လည်း ဒီဖက်က ရခိုင်ရပ်မိရပ်ဖ တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ရခိုင်လူမျိုးများကို ပညာပေးရမှာပေါ့။ အဲဒီလို မျှမျှတတ လုပ်ခဲ့ ဒီပြဿနာကြီးထွားလာမှာ မဟုတ်ဘူး အခုတော့ တဖက်စောင်းနင်း အလုပ်ခန့်ရင်တောင် ရခိုင်ဆိုရင် သိတ်မခန့်ချင်ဘူး လို့ကြားတယ်။ အခုဖြစ်တဲ့အဓိကရုန်းဟာ ရှုံးဆုံးမှုများစွာနဲ့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန်ကမသိခဲ့တာလေးတွေ သိလာရတယ်၊ သတိထားရတော့မယ့် အရာတွေကိုမြင်လာရတယ်၊ အရှုံးထဲကအမြတ် ယူတတ်ဖို့ပဲလိုတယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်စုကပြောခဲ့တာပေါ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ ဒက်ထိအောင်ကိုမှန်တယ်။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး ကိုယ့်စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေရင်ပြီးရော ဆိုပြီးနေနေလို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာအနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်တာခံရယုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ အခုလို ကျုးကျော်စော်ကားခြင်းတွေလည်း ခံနေရအုံးမှာပါ။
မိတ်ဆွေများ အချိန်ရရင်တော့ အောက်ကလင့်လေး သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဦးတင်ဦးပြောတဲ့ ရခိုင်က မူဂျာဟစ် တွေ အကြောင်း ။အခုတစ်ပတ်ပြန်လည်လာတော့မယ်ထင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ Nicholas D. Kristof, Sheryl WuDunn တို့ရဲ့ Half the Sky စာအုပ်လေး ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဖတ်သင့်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေ မှာ အထူးသဖြင့် India Pakistan Afghanistan and Iran စသည်မှာ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားကြတယ်ဆိုတာ အဲဒီကလူတွေ(တစ်ချို့) ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာ ရေးထားတဲ့အကြောင်း ပါ။ အဓိက ကတော့ အမျိုးသမီး သူရဲကောင်းများ အကြောင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ဘ၀ ကိုဘယ်လိုဖောက်ထွက်လာရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်က လွဲလို့ ဘယ်မှာမဆို ၀ယ်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။ အခုရေးတာ ကျွန်တော်ဥာဏ်မှီသလောက် တွေးမိတာလေး ရေးမိတာပါ။ မှားနေရင်လည်းရှင်းလင်းပြပေးကြပါ။
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အရေးကို… တခြားပြည်နယ်က..၀င်ပြော..စွက်ဖက်ရင်.. ကယ်လီဖိုးနီးယန်းတွေစိတ်ဆိုးမှာသေချာတယ်..
ရခိုင်တွေရဲ့..ကိုယ့်ပြည်နယ်အရေးကို.. ဗမာတွေဝင်စွက်ဖက်တာ.. စည်းကျော်နေတယ်.. မထင်မိဘူးမဟုတ်လား..
ဗမာတွေကနေ… မိမိတို့မှ.. စာနာကူညီနေပါတယ်နေကနေ.. ကယ်တင်နေပါတယ်ပုံစံပေါက်လာသလားလို့…
ဦးစောမောင်..န၀တအနေနဲ့.. တက်ခါစက.. ပြောတဲ့..” မြန်မာပြည်ကြီးကို ကျွန်တော်ကယ်တင်ခဲ့သည်”ပုံစံနဲ့ဆင်သလိုလို…
မတူတဲ့အတွေးနဲ့..ချရေးပြရရင်… Rights တွေကျော်လွန်းနေတယ်ထင်မိကြောင်း…
အားနာပေမယ့် သအဂျီးရေ …. ရင်ထဲကလိကလိမို့ ပြောပါဦးမယ် …. ။
အခုဒီကိစ္စမှာ လူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေ ၊ လူမျိုးခြားတွေခဏဖယ်ထားဦး…..
အားနည်းသူကိုအနိုင်ကျင့်လို့ ….. ဘေးလူတွေက .. ကရုဏာဒေါသထွက်ရတယ်လို့ မှတ်ယူပါလားဟင် ….
လမ်းမှာတောင် ခွေးနဲ့ ကြောင်နဲ့ ကိုက်နေတာတွေ့လျှင် ..အားနွဲ့ တဲ့ …. အင်အားနည်းတဲ့ ကြောင်ဖက်က ကူပြီး ခွေးကို ဂဲနဲ့ပေါက်ပေးမိသလိုပေါ့ …. ။ အသည်းမာမာနဲ့ .. . ရပ်ကြည့်နေဖို့ … မရက်စက်တတ်လို့ … ဂဲနဲ့ပေါက်မိတာ … အပြစ်ရှိသွားလားဟင် …
ရှိတာပေါ့..။ ခွေးပိုင်ရှင်က ဘယ်လိုခံစားရမလည်း တွေးပေ့ါ..။ ဒါတောင်ခွေးနဲ့ကြောင်ပဲရှိသေးတာ..။ လူအချင်းချင်းဆို.. အသိုင်းအ၀ိုင်း..။ကိုးကွယ်ရာ..။လူမျိုးစု.. နယ်ပိုင်ဆိုင်မှု.. သမိုင်း.. အများကြီးထည့်စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်..။ ကိုယ်က.. ကိုယ့်အမြင်တခုထဲနဲ့..ဆုံးဖြတ်လို့မှမရတာ..။
တရားရေးမှာ.. ဒေသဆိုင်ရာ.. တရားရေးကအင်မတန်အဓိကကျပါတယ်..။ ယူအက်စ်မှာဆို.. ပြည်နယ်တွေက.. ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေပြဌာန်ခွင့်ရှိပြီး.. ကိုယ့်ဥပဒေနဲ့ကိုယ်လုပ်ကြတယ်..။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရက.. အခြေခံဥပဒေကိုမဖောက်ဖူးထင်သမျှဝင်စွတ်ဖက်ခွင့်မရှိပါ..
ဒါကြောင့်.. တရားရေးကို..ထည့်ပြောပြောနေကြတာပါ..။ တရားရေးက..လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုမရှိရင်..
အင်တာနက်က.. ၀င်ဆဲတယ်..၀င်ပါတယ်..အင်မတန်လွယ်တယ်..။ ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ တာဝန်ယူဖို့မှမလိုတာ..
မတော်.. ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေဆီဥိးတည်သွားရင်လည်း.. ငါကအနေသာကြီးထင်ချင်ထင်မှာပေါ့..။
အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ. အသည်းမာမာနဲ့..စောင့်ကြည့်မလား.. အမြင်ကျယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်မလား.. ရွေးသင့်တာပါ..
ဒေသဆိုင်ရာ တရားရေးက အဓိက ကျတယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် …… အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီလို တရားရေးမျိုးကို … ပြည်သူတွေ အယုံကြည်မရှိတာ လက်မခံနိုင်စရာမရှိလောက်ပါဘူးနော် ။ ကိုယ်ပိုင် ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာလား … ကိုယ်ကျိုးဖက်စီးပွားရှာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သလားဆိုတာတော့ …. အင်ထုပြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ….NRCတွေက သက်သေပါ ။
ဆူပူအုံကြွမှုတွေကို ချက်ချင်း အက်ရှင်မယူနိုင်ခဲ့သေးခင်က …. ရခိုင်ဒေသကပြည်သူတွေကို အရမ်းပဲ စိတ်ပူမိခဲ့ပါတယ် … ။ဒါ့ပြင် ….. ရခိုင်ကိုခဏရောက်နေတဲ့ …. အချစ်တုံးချဉ်ဖတ် ကန့်လန့်သွားတဲ့ ဂဏန်းကြီးဆဲဗမ်းဆဲဗမ်းကိုရောပေါ့ …..။ သူမှမရှိလျှင် ဘုတောရမယ့်လူ… ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေ …… ခွိခွိ
ဆရာ kaiရေ Rights တွေကျော်လွန်းနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့ကိုပြောတာ ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါလား ဘာနဲ့များပက်သက်လို့ကျော်တာလည်း။ေ၇းသားခွင့် rights ကိုပြောတာလား။ ကျွန်နော်က နဲနဲ ထုံလို့ပါဗျာ။ US က rules တွေsystemsတွေတော့ ကျွန်တော်သိပ်မသိကြောင်း ၀န်ခံပါရစေ။ ဒါပေမဲ့ကျနော် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့ မြန်မာပြည်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ကူညီနေကြရတာပါ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယှဉ် မရအောင်ပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ ဒုစရိုက်မှုဖြစ်ရင် ၀င်ကူတဲ့သူရှားပါတယ်။ ရဲကိုသာ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရင် ကြားပေးမယ်။ ကိုယ်က ၀င်ကူလို့ အခန့်မသင့်ရင် အမှုတွဲထဲပါဦးမယ်။ ရဲကလည်းအကြောင်းကြားတာနဲ့ချက်ချင်းရောက်တာဘဲမဟုတ်လား။ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို အဆင့်မှ မရှိတာ။ ဂျပန်မလေး မုဒိမ်းကျင့် အသတ်ခံရ တုံးက ပြည်သူကဖမ်းပြီး ရဲလက်အပ်တာလို့ကြားတယ်။ နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်း ဒါရဲအလုပ် ကိုယ်ကကူညီနိုင်ရင် သက်သေလိုက်ပေးရုံပဲရှိတာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ပြည်နယ်အရေးဝင်စွက်ရအောင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ မြေပုံထဲမှာပဲရှိတာ၊ တကယ်မှ မအုပ်ချုပ်နိုင်သေးတာ။ နောက် ဆရာပြောတဲ့ အရေးဆိုတာ ဘာအရေးပါလဲ။ politically ဒါမှမဟုတ် changes of rules and laws မှာ ၀င်စွက်တယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ဆိုးတာ ဟုတ်မှာပါ။ state of emergency ဖြစ်လာပြီဆိုရင် တော့ အားလုံးပါလာရမှာပဲထင်တယ်။ သြစတြေးလျမှာ မီးလောင်တာတောင် us & canada လာကူတယ်၊ အဲဒီလိုပဲ canada or us မီးလောင်တုံးက နောက်တစ်နိုင်ငံက ၀င်ကူတယ်။ ဒုက္ခရောက်သူကို ကူညီတဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်တော် တို့တော်တော်များများ ဒီထဲမှာ ပြောနေ ရေးနေကြတာတွေဟာ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက် နားလည်ချက်တွေ တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့သဘောပါ။ လက်ခံတာမခံတာကတော့ ဖတ်ရှုသူရဲ့သဘောပေါ့။ ဒီထဲမှာ ပြည်နယ်အရေးကို စွက်ဖက်နိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိတဲ့လူလည်းတစ် ယောက်မှ မပါဘူး လို့ထင်ပါတယ်။ ပါခဲ့ရင်လည်း သူတို့ အတွက်တွေးစရာ ရတာပေါ့ဗျာ။ online ပေါ်မှာ ဆဲဆိုတယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိချင်ရှိမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်ဘူးပါတယ်။ ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြောင့် ဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေလည်း သာမန်လူတွေမှ မဟုတ်တာ ဘယ်အဖြစ်ခံမလဲ။ ကျွန်တော် တို့ကြောင့်တော့ စစ်ပွဲဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု အစိုးရကငြိမ်နေတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း အခြေနေစောင့်ကြည့် နေရတယ်။ အပြင်က ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နိုင်ငံတွေက မြောက်ပေးနေတယ်။ ဒီကိစ္စဒီမှာ ပြီးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တွေက သွေးကြွနေပြီ။ ရှေ့ဆက်ကြည့်ပါ ကျွန်တော့ အထင်တော့ အခြေနေဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်။ ဘယ်လောက်ထိဆိုးလာ မလည်းတော့မသိဘူး။ လောလောဆယ်တော့ အီဂျစ်ကကောင်တွေ မြန်မာအလံခိုးတယ်လို့ပြောနေကြတယ်း) နောက်ပြီး မလေးရှားမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ က ရခိုင်တွေကို လိုက်သတ်တယ်ဆိုလား http://www.thithtoolwin.com/2012/08/blog-post_8602.html#.UBwLmQTTOLM.facebook စတော့ စနေပြီ။ နောက်ဆုတ်ပေးရင် အဆင်ပြေသွားမလား ခေါင်းပေါ်ပဲ ခွစီးမလား ကတော့ ဆက်လက်ရှုစားယုံပဲရှိပါတယ်။ အောက်က ခွေးနဲ့ကြောင် အကြောင်းလေးလည်း ပြောပါရစေ။ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ လမ်းပေါ်ကခွေးတွေက ပိုင်ရှင်မဲ့တွေဆိုတော့ ခွေးကို ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူ က သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ တော်ကြာ ကြောင်ဖက်ကနေ ကိုယ့်ဖက်လှည့်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆရာတို့ USမှာ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ခွေးကို အထိန်းအကြောင်း မပါဘဲ လမ်းမပေါ်လွှတ်ထား လို့ တစ်ခြားအိမ်က ကြောင်ကိုသွားကိုက်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်ကို သွားကိုက်လို့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် တရားစွဲခံရဖို့ များမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်ခွေးကို ထိန်းရမှာ အိမ်ရှင့်တာဝန်ပါ။ တကယ်ခံစားပြီး တွေးပေး ရမှာက ခွေးနဲ့ကြောင် အတွက်ပါပဲ လို့ထင်တယ်။ အထုခံရမှာက ခွေးကိုး။ မတူတဲ့ အခြေအနေလေးတွေ ချရေးပြတာပါ… Rights တွေထပ်ကျော်နေရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ခင်ဗျား)
ကိုရင်က.. တော်တော်လေးကို..အချက်အလက်တွေနဲ့.. လေ့လာရေးထားတာတွေတွေ့ရပြီး.. အဓိပ္ပါယ်မဲ့..ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေတာလည်းမပါတာမို့.. လေးစားမိပါတယ်..
အခြေအနေနဲ့..အချိန်အခါကမသင့်သေးဘူးလို့.. ယူဆတာမို့.. ရပ်ထားပါရစေ…။
Rights တွေကျော်နေတယ်ပြောရာမှာ.. အဓိကကတော့.. ရခိုင်တွေရဲ့နယ်မြေဒေသကိစ္စတွေကို.. ဗမာတချို့က. တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း.. တန်းတူလို့သဘောမထားပဲ.. ၀င်စွက်ဖက်လွှမ်းမိုးရေးသားနေတာ.. ပြောနေလုပ်နေတာတွေ.. မြင်ရလို့ပါ…။ အစိုးရအနေနဲ့ဝင်စွက်ဖက်နေတာကလည်း.. ဘောင်ကျော်လွန်နေတယ်မြင်မိပါတယ်..။
ပြည်နယ်ဒေသတွေအားလုံးကို.. တန်းတူသဘောထား.. ကူညီနေတယ်လို့.. မမြင်မိပါဘူး..။
တရားရေးမဏ္ဍိုင်က.. မခိုင်တာ.. ယိုယွင်းနေတယ်ဆိုတာက.. တပိုင်း..
တရားရေးကို.. နိုင်ငံသားတိုင်း..လေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတာက.. တပိုင်းလို့.. မြင်ကြစေချင်ပါတယ်..
တရားရေးမဏ္ဍိုင်က…ခြစားလို့.. မိမိတို့က.. ဥပဒေတွေ..မလိုက်နာပါဘူး.. မဖြစ်သင့်ပါကြောင်း…
ဖတ်ရင်း အော့နှလုံးနာလာသလို ခံစားရတယ် ….သူတို့ လုပ်ရက်တွေကို စက်ဆုပ်ရွံရှာစိတ်ဖြစ်မိပါတယ် …။ စာရေးသူရဲ့ အရေးကောင်းတာကြောင့် …စာဖတ်ရင်းတောင် …ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့သလိုပဲ …. ။
်ပြောမယ့်သာပြောတာနော် … သူတို့တွေကစည်းလုံးကြတယ် …. ။ ကိုယ်တွေနိုင်ငံသားတွေက နှစ်ယောက်တည်းရှိလျှင်တောင် သုံးဖွဲ့လောက်ကွဲချင်နေတဲ့အချိန် … သူတို့က … အချင်းချင်းဖေးဖေးမမနဲ့ တိတ်တဆိတ် ခေါ်သွင်းလာကြတာ …. အခုမှ လူသိရှင်ကြားသိတော့တယ် … ။
လ၀ကဘက်ကလူတွေလာဘ်စားခဲ့ပြီး …. အခုမှ ထိန်းမရ သိမ်းမရဖြစ်တော့ …. ဒေသခံတိုင်းရင်သားတွေပဲ … မြေစာပင်ဖြစ်ကြရပြန်တယ် … တော်ပါပြီ .. သိပ်မပြောတော့ဘူး …. သဂျီးက … မြန်မာတွေဝင်စွက်ဖက်တယ်ဖြစ်နေဦးမယ် .. ဟွန့် …